Maxaa astaan la’aan wada dhigay?! – Bashiir M. Xersi
Posted on 11 Nov 2012 by Bashiir M. Xersi	Posted in Qoraallo
“Ratiga dambe Ratiga hore saanqaadkiisa ayuu leeyahay!” murti baa tiraa, Xulashadii Maxamed Cusman “Jawaari” loo igmaday Guddoomiyaha Baarlamaanka ka dib, ayaa waxaa is qabsaday hambalyada iyo tahniyadaha ku aaddan wax lagu sheegay ISBADAL dhacay, waxayba ka sii dartay markii mudane Xasan Sheekhna loogu shubay inuu noqdo Madaxweyne, lana yiri maanta ayaan haynnaa dad u qalma hoggaanka dalka, oo aqoon iyo khibradba leh.
Anigu maalintii la doortay Mudane Maxmed CusmanJawaari, waxaan qoray qormadii ahayd: “Aragti gaaban iyo alalaas gundhigay!” oo aan ku iri war yaan la degdegin, anoo tusaale u soo qaatay ninkii waalnaa ee markii loo mashxaraday yiri: “Maxaa la iiga mashaxaradayaa, haddaan mar kale dhumayaaye!” sidoo kale, maalintii Mudane Xasan Sheekh Madaxweyne ku soo baxay ayaan qoray qormo kale, oo cinwaankeedu ahaa: “Maxaa dhacay?!” oo u badnaa weydiimo ku aaddan meesha uu naga soo galay, cidda maalgalisay, anoo tusaale u soo qaatay Maaniyihii yiri: “Hasho Maankayga qaaddaye, ma Masaar bay liqday?!”.
Haddii C/qaasim Salaad Xasan ka gaabsaday inuugacan galiyo oo shanta Farood iyo Calalacal u salaamo Siyaasi dal kale ka socday oo waliba ka qaybgalayey xafladdii loogu CaleemasaarayeyMadaxweyne Jamhuuriyadd, aanna wax colaad ah Soomaali kala dhaxayn, duullaan ku soo ahayn, dagaalna kula jirin muuqda, haddii C/laahi Yuusuf Xabashi soo kaxaystay, ee ku burburiyey hanti, kuna xasuuqay dad, dalna ku baylihiyey, haddii Shariif kuwuu shalay Gaalada ku sheegayey mar kale u habarwacday, ee Kenyana ku sii daray, haddii, wixii dhici lahaa dheceen, haddii aan dhibaatu yaraan, walina ay sii qoyan tahay maxaa xigay?.
Sida xeerarka dunida ay qabaan, siyaasadduna ku qotonto, Madaxda ugu sarraysa ee Dawladi leedahay haddii xil loo doortay waxay leedahay hannaan loo maro, bal aan Tusaale u soo qaato hannaanka Baalmaanka ku dhisan ee Dawladdeenu tahay,Guddoomiyaha Baarlamaanka, Madaxweynaha jamhuuriyadda iyo Wariirka Koowaadba waxaa dhaarintooda u xil saran Guddoomiyaha Mxlamadda sare ee Qaranka.
Haddaba, maalintii Mudane Jawaari codka loogu Shubay ilaa maanta ma aragteen meel uu ku dhaartay, gaar ahaan meel uu ku dheershayGuddoomiyaha Maxkamadda sare? Waliba waxaa jiray in Guddoomiyaha Maxkamadda sareAvvocato Caydiid Ilka Xanaf ka cawday arrintaas, wuxuuna yiri: “Gudoomiyaha Baarlamaanka iyo waliba ku Xigeennadiisa ayaga ayaanba ahayn Sharci! Sababtoo ah ma dhaarin, sidaa darted, waxay ku joogaan Sharci daro!”.
Haddaba, haddii mudane jwaari oo ahGuddoomiyaha Baarlamaanku uusan hortaginGuddoomiyaha Maxkamadda sare si uu u dhaarsho, kana booday Sharcigii u dagsanaa dunida iyo midkii Jamhuuriyadda u yaallay, marka laga soo tago inuu Prof ama Qareen yahay, xilka sida uu ku haayo maxay tahay? Midda kale, qof Dhaar Dastuuri ah looga baahan yahay, haddana aan la marin hawl qaran ma fulin karaa? Midda kale, Profnimadiisii iyo Qareennimadiisii maxay nagu tartay, hadduu garan waayey xilka ha laguu dhaarsho?! Kaba sii darane, waa hadduu kas uga tagee, maxaa laga filan karaa? Bal adba.
5. La dagaallana Argagixisada (sida Dunidu rabto! Soomaalidana dani ugu jirto)
7. La dagaallanka Musuqmaasuqa
8. Sii wadidda wadahadallada Koofurta iyo Waqooyiga
Adoo heli kara inaad intaa oo qodob iyo ka badan bandhigto, sidee looga baaqdaa kulan caynkaa oo kale ah? Haddana, kaba baaqo ma xumee, mudaneDunidu ku eedaysay Musuqmaasuq, SoomaalidunaQabyaalad ku summadday, ma u dirsan lahayd inuu ku matalo? Aqriste, ma aqbali lahayd inuu ninkaa oo kale ku metelo, marka laga soo tago inaadba fursad qaali ah luminayso? Maxaa u diiday inuu dirsado mudane Jawaari oo ay isla wada cusub yihiin, oo aan tuhun dhaqaale lunsi laga qabin?!
Intaa kuma ekaysan, Madaxweyne Xasan, waxaa dhacay Xasuuqii Janaay Cabdalla, falkan waxaa si wada jir ah u cambaareeyey IGad iyo Amisom,halka Kenya oo ciidamadedu xasuuqa gaysteen ay tiri baritaan baan ku samaynaynnaa, Madaxweyne Xasanna xitaa Tacsi Qaramadeed uma dirin dadkaa waxyeelladu soo gaartay, iska daa inuuCambaareeyee ama uu magacaabo Guddi baaritaan ku sameeyo falkaa waxashnimo ee dhacaye, haddana, Kismaayo ayaa Alshabaab isaga baxday, ayna gudaha u galeen Kenya, Amisom, Ciidan ka socda Dawladda iyo Malleeshiyaad ay kala hoggaanshaan Axmed MAdoobe iyo Gaandi, dhacdadaa oo wax ka badli doonta isu dheellitirka awoodda Jubbooyinka, walise maxdaweynu wax ka kama dhihin, aan ka ahayn kulanka uu la qaatay madaxda Uganda iyo Kenya, waana meesha Maradu uga dhacday!
La yaabka ugu daran baa ahaa, inuu dhacay shir Kenya iyo Ethiopia ay qabanqaabiyeen, balse, lagu sheegay shir IGAD oo ku qabsoomay magaalada Nairobi, oo looga arrinsaday aayaha iyo maamul u samaynta Jubbooyinka, Dawladda Xasan Sheekhshirkaa marti xitaa kuma hayan, bal iska daa inay aragtiyo iyo fekerado ku lahaatee, Kismaayo waxaa marti looga yahay Kenya iyo Ethiopia, dabcan lagana suganayaa inay go’aan ka qaataan Gobollo Soomaaliyeed, haddii kuwii ku maqnaa aanba lagu haysan, haddana ma kuwii kale ayey sida ay rabaan ka yeelayaan? Allow adaa faxan.
Meesha fadeexadda ugu weyn ka raacday madaxweyne Xasan waxay ahayd magaaladaKampala, Madaxweyne Xasan wuxuu qaabilay madaxda Uganda iyo Kenya, dabcan si uu ugala hadlo xaalka wadanku marayo iyo sida loo sii baacsan karoArgagixisada, dhibka ayaase ahaa inuu iska soo fariistay ama iska soo istaagay goobtii uu ka dhici lahaa shirku astaan la’aan, halka madaxda kale uu mid walbaa garabkiisa surnaa calankiisa, keenna meesha ma ool!
Biyo lagu manfaco iyo
Inuu nagu mashquulaa
Sida ay u dhaqmayaan waa isku mid, sida ay u xeerinayaan waa isku mid, sida ay u fekeraan waa isku mid, sida ay u shaqeeyaan waa isku mid, sida ay u safraan waa isku mid, kaliya waxay u kala duwan yihiin dhabbaha, jidka, qaabka iyo qiyaasta, sidoo kale waxay ku kala duwan yihiin halka ay u socdaan, waxa ay doonayaan, danta ay higsanayaan iyo hammiga ku jira.
Muranka Madaxda Dawladda !